नवरात्रीमा दुर्गाको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी तीन कुरा - Digital Khabar
नवरात्रीमा दुर्गाको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी तीन कुरा
२२ आश्विन, काठमाडौं । बिहीबारदेखि बडादशैं तथा नवरात्र शुरु भएको छ । नवरात्रको अवधिभर दुर्गामाताको पूजा आरधाना एवं उपासना गरिन्छ । माता दुर्गालाई शक्ति र उर्जाको रुपमा लिइन्छ ।